Ungaba njani nguDoula wokuFa: Isikhokelo kuMsebenzi oKhethekileyo - Ukungcwaba Nokutshiswa
Ungaba njani nguDoula wokuFa: Isikhokelo kuMsebenzi oKhethekileyo
Idoula yokufa ibonelela ngenkxaso kumntu kwinkqubo yokudlula. Ukuba unomdla malunga nokuba ungafa njani i-doula, gcina engqondweni kukho iindlela ezininzi zemfundo onokuzithatha.
Ungaba njani kukufa kukaDoula
Zombini iingcali zonyango kunye nezingezizo ezonyango ziyakwazi ukuba ziidoulas zokufa ngoqeqesho olufanelekileyo kunye nesiqinisekiso. Eyona nto iphambili ekufuneka uyenzile ukuze ube kukufa kukukwazi ukuphatha ngokufanelekileyo ubungqina kunye nokuxhasa umntu ngenkqubo yokufa.
ungaphendula njani xa uncome?
I-Thanatology kunye neNdima ye-Thanatologist ichaziwe
Ngaba Uyanuka Xa Umntu Eswelekile?
Kukho zombini kwi-Intanethi kunye nakuqeqesho lokufa kwesiqinisekiso se-doula ezikhoyo. Uqeqesho luya kwahluka ngokobunzulu kunye neeyure ezifunekayo. Uqeqesho lokufa kwedoula kuhlala kugubungelainkqubo yokufa ikhangeleka njani,kwenziwa kanjaniNika inkxaso efanelekileyo kwabo bakwinkqubo yokufa, kunye nendlela yokunceda abantu baqhubele phambili iminqweno yabo yokuphela kobomi. Ezinye iinkqubo zoqeqesho ziya kufuna:
Ukuba uthathe uvavanyo ekupheleni koqeqesho lwakho kunye nenqaku lokugqibela lokupasa elixhomekeke kwinkqubo ethile
Inani elithile leeyure nomthengi oqinisekiswe ngumboneleli oqeqeshiweyo wezonyango okanye elinye ingcali ekhathalela isigulana esinye
Isicelo sesatifikethi esifakiweyo wakuba ugqibile iiyure zakho zabaxumi
Isiphelo soBomi soQeqesho lukaDoula
Ezinye iinkqubo zoqeqesho lwe-doula ziya kubonelela izifundo free intshayelelo , kodwa ngokubanzi, ukuba ungathanda ngakumbi kuqeqesho olunzulu, kuya kufuneka uhlawule umrhumo. Uqeqesho lunokubiza naphi na ukusuka kwi- $ 600 ukuya ngaphezulu kwe- $ 3,000 kuxhomekeke kwinkqubo oyikhethayo.
Ungathenga phi ikhadi lesipho sevanilla
Ukufa kukaDoula Umvuzo
Ukufa kwe-doulas kuhlala kuqeshwa njengeekhontrakthi ezizimeleyo. Ngelixa unokubeka umrhumo wakho kubucala, ukuba uqeshwe njengonokontraka ozimeleyo, kuya kubakho uhlahlo-lwabiwo mali oluthile abanalo kolu hlobo lwendima. Ngeyure, ungenza naphi na ukusuka kwi-30 ukuya kwi-100 yeedola kuxhomekeke kuseto.
Isiqinisekiso sokufa kukaDoula
Inkqubo nganye yesatifikethi iya kwahluka ngokuxhomekeka kubunzulu benkqubo oyikhethileyo. Isatifikethi se-Death doula asilawulwa ngumbutho olawulayo, ke kubalulekile ukuba ujonge iinkqubo ezininzi ngaphambi kokukhetha leyo ibonakala ikulungele. INELDA (I-International End of Life Doula Association) ibonelela ngezixhobo eziluncedo kwabo banomdla wokufuna isatifikethi se-doula sokufa.
Yintoni omele uyiqwalasele ngaphambi kokuba ube kukufa kukaDoula
Ukuba yi-doula yokufa ngumsebenzi onentsingiselo emangalisayo, nangona kunjalo, ezinye izinto zinokungabi lolona hlobo lulungileyo lomsebenzi. Kubalulekile ukuba wazi ukuba nganye nganyeinkqubo yokufaizakujongeka ngokwahlukileyo. Abanye banokuba noxolo, kodwa abanyeunokufumana umzimbakunye nentlungu yeemvakalelo ngexesha lokufa. Ukuba ungumntu ophazamiseka ngokulula, okanye unexesha elinzima leemvakalelo ezinzulu, oku akunakuba lolona khetho lufanelekileyo onokuzikhethela lona.
I-easy zombie makeup inyathelo ngenyathelo
Ngubani Onokuba Kukufa kukaDoula?
Nabani na unokuba yi-doula yokufa ukuba banomdla wokwenza njalo. Ukuphela kobomi boqeqesho lwe-doula kunokuba luncedo kubaqeqeshi bezonyango, abasebenzi be-hospice, kunye naye nawuphi na umntu okwangoku osebenza nabo bakwinkqubo yokusweleka. Nokuba ungangumntu onjani ngemvelaphi yakho, ukuba uziva uneempawu zobuntu kulo msebenzi, unokuqhubeka ube yidoula yokufa.
Ngaba ukufa kweDoulas kuFunwa?
Ukufa kwe-doulas yinkonzo efunekayo kwaye ngoku ikwimfuno. Njengoko ukutshintshela ekuswelekeni ekhaya kuqhubeka nokunyuka, ukufa kwe-doulas kuyakwazi ukubonelela ngenkxaso njengenxalenye yeqela lokhathalelo lokuphela kobomi.
Kuphi Ukufa kweDoulas kusebenza?
Ukufa kwe-doulas kuyasebenza kwizibhedlele, amaziko ononophelo novelwano,Ukunyamekela, kwaye usebenze kwi-doula yangasese. Ukufa kwe-doulas kunokuziqhelanisa namavolontiya, njengenxalenye yomsebenzi wabo, okanye njengomsebenzi wabo.
Yiba sisiphelo soBomi seDoula
Ukuba unomdla wokuba kukuphela kobomi be-doula, jonga indlela ongathanda ukuziqhelanisa ngayo nokuba unethemba lokuba lo ngumsebenzi wakho, okanye ithuba lokuvolontiya.
Iinkampani Zemortgage C Zonke Ukuthintela Umlilo Nokukhusela Ikhalori Ithintelwe Diet Ski Resort Uhlolo
indlela yokulungisa izipikili emva kwee-acrylics
Eyona ndlela yokususa i-mascara engenamanzi
uyifumana njani imizuzu yasimahla kwi-tracfone
ungazigcina njani iikati ngaphandle kwezityalo zangaphakathi
wenzeni ngomxube wepayi yethanga eseleyo
zizikhova ezintle okanye ezintle